Fepetra tamin’ny filankevitry ny governemanta: hatsahatra ny gaboraraka amin’ny fampiasana “Gyrophares” | NewsMada
Fepetra tamin’ny filankevitry ny governemanta: hatsahatra ny gaboraraka amin’ny fampiasana “Gyrophares”
Par Taratra sur 28/01/2019
Vita hatreo ny gaboraraka. Hentitra ny fepetra noraisina ary tena miroso ho any amin’ny fanovana. Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny governemanta natao teny Mahazoarivo, ny zoma teo, ny fanamafisana ny fepetra momba ny fivezivezen’ny fiaran’ireo manampahefana.
Manomboka izao, tsy misy manampahefana afaka mampiasa “gyrophares” na jiro loko mena na loko hafa amin’ny fiara intsony eny an-dalana rehetra eny. Tsy mahazo mandeha amin’ny lalan-tokana na ilay antsoina hoe ” sens unique” koa ny fiaran’ireny manampahefana ireny. Voarara ny fisongonan’ireny fiara ireny anaty fitohanana na amboteazy. Amin’ny ankapobeny, raha miainga amin’io filankevitry ny governemanta io, tsy azo atao ny manararaotra fahefana eny an-dalana rehetra eny ho an’ireo mpitondra ambony. Tafiditra amin’ny fifanajana sy ny fampitoviana eo amin’ny rehetra koa izao fepetra noraisin’ny fitondrana izao.
Hanaterana mpianatra na ny vady hiantsena…
Tsiahivina fa tsikaritra nandritry ny taona maro ny gaboraraka amin’ny fampiasana ireny jiro mena mialoha ny fiaran’ireo mpitondra na manampahefana ireny. Hanatitra mpianatra na handeha hiantsena ramatoa na koa tsy mifandray amin’ny asan’ilay manampahefana ny antony hampiasan’izy ireo izany. Eo koa ny fahatarana noho ny antony samihafa ka manampatra fahefana eny an-dalana rehetra eny, ka manampatra sy manararaotra ny fahefana eo an-tanana. Fotoana izany izao handraisan’ireo polisy na zandary fepetra amin’ireo mbola minia manampatra fahefana na zatra manao hitsin-dalana noho ny fahefana eo an-tanany amin’ny fifamoivoizana na koa manararaotra ny maha mpitondra na mpitantana ambony azy.
Novana ho “plaque rouge” ny fiaram-panjakana
Na izany aza, efa misy ny voafaritry ny lalàna ny amin’ny fahazoan’ireo lehiben’ny Andrimpanjakana toy ny filoham-pirenena, ny praiministra, filohan’ny parlemanta mampiasa ny jiro mena sy ny loko hafa eny an-dalana sy ny fahafahany misongona anaty fitohanana.
Anisan’ny efa fepetra noraisin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, mialoha izao ny nametahana ny laharan’ny fiaram-panjakana ho mena avokoa na ny “plaque rouge”. Mba tsy ho afo mololo avokoa anefa izany rehetra izany fa tena hihatra ary tsy hijerena tavan’olona.